Ikotishi elithandekayo elinokubukwa kolwandle e-archipelago idyll
Haninge C, Stockholms län, i-Sweden
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Lotta
Ikotishi elithandekayo labantu abangu-2-3 endaweni emaphakathi endaweni enhle yasemakhaya.
Ikotishi elithandekayo labantu abangu-2-3 endaweni emaphakathi endaweni enhle yasemakhaya. Ikotishi licishe libe ngu-35 sqm futhi lisebenza ngamaphaneli elanga. Inesitofu sokhuni, umbhede ophindwe kabili onethezekile, indawo yokulala enemibhede emikhulu, igumbi lokugezela elinamathayela kanye nekhishi elihlome ngokuphelele. I-patio ethandekayo enokubukwa kolwandle kanye nokufinyelela ku-barbecue. Ibanga elingu-150m kuphela ukuya endaweni yokugezela kanye nemizuzu emi-5 ukuya olwandle lokugeza.
Ikhishi linetafula lokudlela labantu abangu-4 futhi lihlome ngokugcwele isiqandisi, isiqandisi, isitofu/uhhavini, imicrowave, iketela, itoaster nomshini weNespresso.
I-Dalarö iyidolobhana elibukekayo elingasolwandle elinemvelaphi yasendulo. Emuva ngekhulu le-19, yaba yindawo yokungcebeleka yolwandle edumile, esaqhubeka kuze kube namuhla.
Kukhona isitolo se-Ica esigcwele kahle, isitolo sezwe esihle, isitolo sezinhlanzi, i-pizzeria, indawo yokubhaka kanye nezindawo zokudlela ezahlukahlukene ngaphakathi kwamamitha angama-500 ukusuka ekotishi.
Ngakolunye uhlangothi lomsele, eSchweizerbadet, kunendawo yokubhukuda, indawo yokuzivocavoca yangaphandle, inkundla yebhola enotshani bokwenziwa, i-skate rink kanye nenkundla yenkundla. Eduze kancane kwebhuloho lomsele yiDalarögym lapho ungathenga khona amakhadi ukuze uvakashe ngezikhathi ezithile ku-www.dalarogym.se
I-Smådalarö Gård Hotell & Spa itholakala cishe ngamakhilomitha angu-5 ukusuka e-Dalarö square futhi inikeza izifundo zokubhukuda / i-spa, igalofu nama-paddle.
Ikotishi lisendaweni efanayo nesakhiwo sethu sokuhlala ngakho-ke sifuna ukucatshangelwa.
Izilimi: English, Français, Deutsch, Svenska